Posted on May 02, 2016 | views: 662
हाम्रै नेपालमा । बुहारीलाई भलिबल अनिवार्य
१९ चैत, पर्वत । नयाँ बुहारी राम्री, जाँगरिली र परिपार ढपक्कै ढाक्ने हुन भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । तर, यहाँको क्याङमा आउने बुहारीको क्षमता त्यत्तिले मात्र पुग्दैन र उनी भलिबल खेल्न सक्नेसमेत हुनुप...
गाईले सात खुट्टा, दुई टाउको भएको बाछी जन्मायो (फोटो फिचर)
११ चैत, काठमाडौं । काठमाडौंमा गाईले अनौठो खालको बाछी जन्माएको छ । दुई टाउको र सात खुट्टा सहितको एउटै बाछीलाई आज गाईले जन्माएको हो । काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिका मनमैजुमा एक किसानकोमा गाईले यस्तो अ...
Posted on April 30, 2016 | views: 653
अन्डरवेयर र मोजा चोर्ने विरालो पक्राउ
एजेन्सी । न्यूजिल्याण्डमा पुरुषको अन्डरवेयर र मोजा चोरी गर्दै आएको एक विरालो पक्राउ परेको छ । रातको समयमा अरुले सुकाएका र बाहिर राखेका मोजा चोर्दै आएको यो ६ वर्षको विरालोको नाम ब्रिगिट भएको बताईएक...
Posted on May 02, 2016 | views: 658
केरा संसारबाटै लोप हुने !
८ चैत, काठमाडौं । सबैभन्दा स्वादिष्ट र पोषिलो ‘ग्रस माइकल’ जातको केरा संसारबाट ७० वर्षअघि नै लोप भयो । ‘पानामा डिजिज’ नामक ‘फंगस’ ढुसी को फैलदो संक्रमणले क्याभेन्डिस जातको करा पनि विश्वबाटै हराउने ...
१ चैत, एजेन्सी । छिमेकी भारतमा अनौठा कृत्य भैरहन्छन् । कहिले कुखुरालाई पुलिसले पक्रिन्छ त कहिले बाख्रोलाई पक्रिन्छ । कहिले भगवानको नाममा परिचयपत्र तयार हुन्छ । यो पाला भने भारतको एक अदालत निकै क्रान्...
Posted on May 03, 2016 | views: 976
बाबुआमालाई आफ्नै छोराछोरीले मार्ने अनौठो चलन
एजेन्सी । मनिसलाई जानाजान मार्ने अमानविय कार्य कानुनी रुपमा दण्डनीय भएपनि तमिलनाडुमा यो प्रथा अझै कायमै छ । संसारमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यक्तिको रुपमा लिईले आफ्नो जन्मदिने बाबुआमाको बुढाबुढी भएपछी आफ...
Posted on May 02, 2016 | views: 709
सुँगुरले हात्तिको बच्चा जन्माएपछि !
एजेन्सी । हुनलाई तस्विरमा देखिएको बच्चा सुंगुरको हो । सुँगरले जन्माएपनि हेर्दा भने यो ठ्याक्कै हात्ती जस्तो छ । तर हेर्दा हात्ती जस्तो देखिने यो सुंगुरको बच्चाको व्यहोरा भने सुँगुरकै छ । यो अनौठो ...
Posted on May 02, 2016 | views: 689
कुकुरले मालिकलाई गोली हानेपछि
१० कार्तिक, एजेन्सी । तपाईलाई पत्याउन मुश्किल पर्ला तर अमेरिकामा एउटा कुकुरले आफ्नै मालिकमाथि गोली हानेको छ । घटना अनुसार अमेरिकामा एक महिला आफूले पालेको कुकुरले चलाएको गोली लागेर घाइते भएकी छिन् । इन...
Posted on May 03, 2016 | views: 750
खोटाङ भेटिए १ सय ७६ वर्षीय बृद्ध
२९ सोज, खोटाङ । तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ खोटाङको दक्षिणी गाविस खोटाङबजार–७ मा १ सय ७६ बर्षका बृद्ध भेटिएका छन् । नझुक्किनुहोला ७६ हैन १ सय ७६ बर्षका जुन कुरा नागरिकतामा प्रष्ट लेखिएको छ । खोटाङबजार...